2018 – Year – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Vanishing (2018) ဒီကားလေးကိုရေးရတာ ရင်ထဲမှာ အရမ်းကိုထိရှမိတယ်။ ဇာတ်ကားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ လူကငြိမ်ပြီးကျန်နေခဲ့တဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဇာတ်လမ်းက အဆန်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝကို ပီပီပြင်ပြင်ဖော်ပြပေးသွားတယ်။အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ရင်ထဲမှာတစ်ခုခုကျန်ခဲ့တဲ့အရသာကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ဇာတ်လမ်းကတော့ မီးပြတိုက်စောင့်ဖို့ အလှည့်ကျတဲ့ လူသုံးယောက်ဟာဂျူတီဝင်ဖို့အတွက် မီးပြတိုက်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရောက်ရှိပြီးမကြာခင်မှာပဲ မီးပြတိုက်ရှိရာကျွန်းကို လူတစ်ယောက်နဲ့သေတ္တာတစ်လုံး မျောပြီးလာတင်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲဒီကစပြီး သုံးယောက်လုံးရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် တိတ်ဆိတ်ခြောက်သွေ့တဲ့မီးပြတိုက်လိုနေရာတစ်ခုမှာစိတ်ခြောက်ခြားစရာတွေပါ ထပ်ရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလူသုံးဦးရဲ့ ကံကြမ္မာက ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုပြသပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်… Credit Review
IMDB: 5.8/10 4,282 votes
The Assassin’s Code (2018) မိုက်ကယ်ကွန်နယ်လီ ကလေ့ဗ်လန်းမြို့နယ်လေးက ရဲစခန်းက စုံထောက်တစ်ယောက် ဖခင်ဖြစ်သူကရဲဖြစ်ပြီး မူးယစ်ဆေးအရောင်းအဝယ်မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်နေတော့ သူ့အဖေကိုမုန်းတီးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့သူကိုယ်တိုင်ရဲဖြစ်လာတဲ့အခါ သူ့အဖေနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့တဲ့မူးယစ်ဆေးအမှုကိုကိုင်တွယ်ရဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ်ဒီလိုမျိုးဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာအကောင်ကြီးကြီးအမြီးရှည်ရှည်ကောင်တွေပါနေကြဆိုတော့အခုဒီကားမှာလည်း အညတရရဲစုံထောက်လေးတစ်ယောက်က ဘယ်လိုများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုတာဒေါင်းကြည့်လိုက်ကြပါဦးလို့ Review Credits - ကိုဟိန်းမင်းထွန်း
IMDB: 5.3/10 635 votes
Sui Dhaaga: Made in India (2018) သာမန်လူတန်းစား တူနှစ်ကိုယ် ဘဝတစ်ခု၊ဒီနေ့ ရှာ ဒီနေ့စားရတဲ့ လက်လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်ရတဲ့ အကြင်လင်မယားနှစ်ယောက် အကြောင်းလေးပေါ့ဗျာ။မိဘတွေနဲ့ အတူနေနေပြီး သားသမီး မရှိသေးတဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက်။အိမ်ရှင်မက အိမ်အလုပ်တွေကို တနေကုန်လုပ်ပြီးလင်ယောက်ျားကတော့ နေ့စဉ် အလုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂလိက အပ်ချုပ်စက်ဆိုင် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ဒီနေ့မှာ အဆင်ပြေပေမဲ့ မနက်ဖြန် ဘာဖြစ်မလဲ မသိရတဲ့ လူသားတွေမို့အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားခြင်း မရှိခဲ့။တနေ့မှာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်သားရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကိုသူတို့မိသားစုတွေ ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။မိသားစုတွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ ပွဲကိုရောက်သွားတော့အမြဲအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ သူတို့သားကခွေးလို သရုပ်ပြခိုင်းပါတယ်။မိသားစုတွေနဲ့အတူ ဇနီးမယားကကိုယ့်ယောက်ျား ခွေးလို သရုပ်ဆောင်နေရတာကိုမြင်တော့ အရှက်ရပြီး အလုပ်က ထွက်ခိုင်းပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ အလုပ်အကိုင် မရှိတဲ့အချိန်…..သူတို့တွေ ပြဿနာကို တစ်ခုကို ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုသူတို့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။မုန်းတိုင်းတစ်ခုသာဆိုရင်မုန်တိုင်းပြီးရင် လေပြေလာဦးမှာပေါ့?ဘဝအခြေအနေအရ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာတွေကိုဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြမလဲ ဆိုတာကို ခံစားကြည့်ကြပါဦးဗျာ။“အပ်နှင့်အပ်ချည်:အိန္ဒိယတွင်ပြုလုပ်သည်”ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားနာမည်အရသူတို့ကို ပြဿနာတွေထဲက အပ်နဲ့အပ်ချည်ကြိုးကဘယ်လို ဆွဲတင်ကယ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုရင်း သန္တရသနဲ့ အဆုံးသတ်စေမှာပါ။———————————————-သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ ဘောလိဝုဒ်မင်းသားချောVarun Dhawan ...
IMDB: 6.8/10 4,545 votes
The Hate U Give (2018) အခုတင်ဆက်ပေးမယ့် The Hate You Give ဒရာမာဇာတ်ကားကတော့ စာရေးဆရာမ Angie Thomas ရဲ့ New York Times Best Seller ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားထက် အသက်သွင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Tomatometer 97%, IMDb rating 6.9/10 ရရှိထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ George Tillman Jr. ရိုက်ကူးပြီး Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby နဲ့ သရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။ အသက် ၁၆နှစ်အရွယ် လူမည်းမိန်းကလေး Starr Carter ဟာ လူဖြူတွေကြီးစိုးတဲ့ Willamson Prep private school က ကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Starr သွားတက်တဲ့ ပါတီတစ်ခုမှာ သေနတ်ဖောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် ကျောင်းဆင်းချိန်တွေမှာ သူ့ရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်း Khalil ...
IMDB: 7.2/10 13,601 votes
Elizabeth Harvest (2018) အဲလိဇဘတ်​ ဆိုတဲ့ ငယ်​ငယ်​​ချော​ချော​ကောင်​မ​လေးနဲ့​ဒေါက်​တာ ဟင်​နရီ တို့ဟာလပ်​ထပ်​ပြီး​နောက်​​ဒေါက်​တာ ဟင်​နရီ ရဲ့ အိမ်​ကို​ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်​ ​ဒေါက်​တာဟင်​နရီဟာ သူရဲ့​ဆေးပညာဆိုင်​ရာရှာ​ဖွေ​တွေ့ရှိမှု​တစ်​ခုကို မှတ်​ပုံတင်​နိုင်​ခဲ့ပြီးနောက်မှာ​တော့ ဘီလျံနာဘဝနဲ့သိပ္ပံပညာ​လောက က​နေအနားယူသွားခဲ့ပါတယ်​ဟင်​နရီရဲ့အိမ်​ကြီးက smart home လို့​​ပဲ​ပြောရမလားတံခါး​တွေကအစ codeနံပါတ်​​တွေ လက်​​ဗွေရာ​တွေနဲ့ဖွင့်​ရတာအလန်းကြီး​ပေါ့​နော်​ အိမ်​ကြီးဆီ​ရောက်​တဲ့အခါ ဟင်​နရီက အဲလိဇဘတ်​ ကိုရှိသမျှ ရတနာ​တွေ​ ပိုက်​ဆံ​တွေ အကုန်​လုံးကိုမင်းပိုင်​ပါတယ်​လို့​ပြောခဲ့တယ်​သူတစ်​ခုပဲ ​တောင်းဆိုခဲ့တာ က အခန်းတစ်​ခန်းကို ဝင်​မကြည့်​ဖို့ပဲလူ့သဘာဝဆိုတာကလည်း မကြည့်​နဲ့ဆိုမှပိုကြည့်​ချင်​ကြတာကိုးဒါနဲ့ဟင်​နရီအလုပ်​ကိစ္စနဲ့ခရီးထွက်​တဲ့တစ်​​နေ့မှာ​တော့ အဲလိဇဘတ်​ ဟာ တားမြစ်​ထားတဲ့အခန်းကိုဝင်​ကြည့်​ခဲ့ပါတယ်​အခန်းထဲမှာ​တွေ့လိုက်​ရတာ​တွေက​တော့………​…..ဟင်​နရီဖုန်းကွယ်​ထားတဲ့ကြောက်​စရာ လှို့ဝှက်​ချက်​ကြီးတစ်​ခုပါပဲ အများကြီးထပ်​​ပြော​နေရင်​ ကြည့်​တဲ့အခါအရသာပျက်​မယ်​(ခု​တောင်​​တော်​​တော်​​ပြောမိ​နေပြီလားပဲ) ဒီ​တော့ဘာဆက်​ဖြစ်​​ကြမလဲ ဘာလှို့ဝှက်​ချက်​​တွေလဲသိချင်​ရင်​​တော့​ဒေါင်းသာကြည့်​ကြပါ​တော့... ရုပ်ရှင်ကားရဲ့အညွှန်းကိုတော့ Chanyein Soe (Channel Myanmar) မှကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
IMDB: 5.7/10 2,752 votes
Danger One (2018) ဒိန်းဂျားဝမ်း ဆိုတဲ့ အရေးပေါ်လူနာတင်ယဉ် လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ပိုင်ရှင် ဒင်းန် နှင့် သူ့ရဲ့ လက်ထောက်လဲဖြစ် သူငယ်ချင်းလဲဖြစ်တဲ့အဲရစ် တို့ဟာ အရေးပေါ် ကားအက်ဆီးဒင့် တစ်ခုကနေလူနာတစ်ယောက်ကို သယ်လာခဲ့ပါတယ် သူတို့နဲ့ အတူ မီးသတ် ရဲဘော် မတ် ဆိုသူလဲကူညီရန်လိုက်လာခဲ့ပြီးနောက် လူနာရဲ့အကျီအတွင်းအိတ်တွင်းမှာ ခိုးသယ်လာသောUS ဒေါ်လာများကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး လူသေကိုအပ်ပြီးပိုက်ဆံများကို ၃ ယောက် အတူ ဖျောင်လိုက်ကြရန်ဆွေးနွေးပြီး သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်… မှောင်ခို ပိုက်ဆံများဖြစ်တဲ့ အတွက် မည်သူမျှသူတို့နောက်ကို မလိုက်ဟု ထင်ခဲ့ကြသော်လဲပဲရဲ နှင့် မှောင်ခို ဂိုဏ်း မှ အသေရရ အရှင်ရရထို ပိုက်ဆံများနောက်သို့ လိုက်ခဲ့သော် အခါဒိန်းဂျားဝမ်း ပိုင်ရှင် ဒင်းန် နှင့် အဲရစ် တို့ပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်လို မတွေ့အောင်ရှောင်တိမ်းပြီး ဘုန်း ကြမလဲဆိုတာဟာသ ရောပြီး ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်…. Credit - Review
Champion (2018) ကိုရီးယား ဒရာမာဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကို ကြည့်ရှူချင်ကြသူတွေအတွက် ဝတုတ်မင်းသားလို့ခေါ်ကြတဲ့ ကိုရီယားမင်းသား Ma Dong-Seok ရဲ့ ၂၀၁၈ ထွက်ကားကောင်းတစ်ကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…မာ့ခ် လို့ခေါ်တဲ့ ကိုရီယားလူမျိုး တစ်ယောက်ဟာ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် အမေရိကန်လူမျိုးမိသားတစ်စုရဲ့ မွေးစားခြင်းကိုခံရပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံမှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်..သူဟာငယ်စဉ်ကတည်းက လက်မောင်းလှဲအားကစားကို ရူးသွပ်ပြီး ချန်ပီယံတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ…ဒီလိုနဲ့အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ အမေရိကန် လက်မောင်းလှဲ အားကစားအသင်းတစ်ခုမှာ ဝင်ရောက်ကစားကာ အောင်ပွဲတွေဆက်တိုက်ယူနေရင်း အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်မှာ သူဟာ ကလပ်တွေ ဘားတွေ ဈေးဆိုင်တွေမှာ လုံခြုံရေးအဖြစ် ကြုံရာ လုပ်ကိုင်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်တစ်ရက်တော့ ညီအစ်ကိုလိုချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကိုရီးယားမှာ လက်မောင်းလှဲပြိုင်ပွဲကြီးရှိတဲ့အတွက် သူ့ကို ကိုရီးယားကိုခေါ်ပါတော့တယ်….မာ့ခ်တစ်ယောက် ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ကိုရီးယားရောက်လာပြီး သူ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုကို ပြန်လည်ရှာဖွေရင်း ချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါမလား….။အရမ်းကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး အသည်းနုသူတွေအတွက် မျက်ရည်ဝဲစေမယ့်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်လို့ အာမခံပေးပါရစေ။ (အညွှန်းကိုတော့ Channel Myanmar မှကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။)
The Nutcracker and the Four Realms (2018) ကလက်​ယာဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်​ယောက်​အတွက်​ သူ့အမေမဆုံးခင်​ကတည်းက သူ့အတွက်​ပြင်​ဆင်​ထားခဲ့တဲ့ လက်​လုပ်​ဥပုံသဏ္ဌာန်​ သေတ္တာလေးကို အဖေ့ဆီကနေ ခရစ်​စမတ်​လက်​ဆောင်​အနေနဲ့ရခဲ့တယ်​...ဒါပေမယ့်​ သူမဖွင့်​တတ်​ခဲ့ဘူး...ဒီလိုနဲ့ ခရစ်​စမတ်​ကပွဲရောက်​သွားတော့ သူ့နာမည်​တပ်​ထားတဲ့ကြိုလေးတစ်​ချောင်းနောက်​လိုက်​ရင်း ဖွင့်​ဖို့သော့ရှာတွေ့သွားခဲ့တယ်​... ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ သော့ကို ကြွက်​ကလေးတစ်​ကောင်​ကကိုက်​ချီပြေးသွားလို့ ကြွက်​နောက်​လိုက်​ရင်းနဲ့ စတုတ္ထတိုင်းပြည်​ထဲရောက်​သွားတဲ့အခါ.......စတုတ္ထတိုင်းပြည်​ထဲဘယ်​လိုဆက်​ဖြစ်​ကြမလဲဆိုတာChristmasလက်ဆောင် ရှာတဲ့ကြိုးတန်းလေးနောက်လိုက်ရင်း Claraတစ်ယောက် ထူးဆန်းလှပပြီး Land of Snowflakes, Land of Flowers, Land of Sweetsနဲ့ Land of Amusements(Forth Realm) တွေနဲ့ ပေါင်းစပ် ထားတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးကို မထင်မှတ်ပဲ ရောက်သွားတဲ့အခါ...ဒီLandတွေထဲမှာ Mother Gingerကြီးအုပ်စိုးနေတဲ့ Forth Realmနဲ့ အခြားLandတွေကြား အတိုက်အခိုက်တွေ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကနေ ရပ်တန့်အဆင်ပြေသွားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ Claraအပေါ် တာဝန်ကျလာခဲ့တဲ့အခါ....ဘာ​တွေဆက်​ဖြစ်​ကြမလဲ ဆိုတာဇာတ်​ကား​လေးထဲမှာ ဆက်​လက်​အား​ပေးကြပါခင်​ဗျာ.. အတူကြည့်မယ့် ဘော်ဘော်တွေကိုလည်း Mention ပေးပြီး Share ပေးကြပါဦး.... Reviewed By ...
Bigger (2018) ဒီတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်ကားကတော့ 2018 September ကထွက်ရှိထားတဲ့ Bigger ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံထားပြီး ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးအာနိုးရဲ့ကိုယ်ကာယဗလနည်းပြစရာ Joe Weider ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားပါတယ်.. မင်းသားကြီးအာနိုးရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကိုလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွေ့မှာပါ..Joe Weider ဟာယခုရေပန်းစားနေတဲ့ Gym အားကစားရုံတွေကိုယ်ကာယအလှအပဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်မစားခင်ကတည်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလူတိုင်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ... အဲဒီအချိန်ကလူတွေအလေးမကစားတာဟာ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားရုံသက်သက်နဲ့အားကြီးဖို့အတွက်ပဲဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုရိုက်ချိုးခဲ့ပါတယ်..Joe ကိုယ်တိုင်လည်းကာယဗလမောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး..သူကလူတိုင်းကိုအိမ်မှာပဲအလွယ်လုပ်နိုင်တဲ့အားကစားနည်းတွေ.. ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကိုဘယ်လိုမှီဝဲရမယ်...ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွှတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးလူတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်ကြောင်း အစသဖြင့်သိပညာပေးလမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲအခေတ်အခါက လူတွေရဲ့အသိအမြင်အားနည်းပုံကိုတွေ့ရသလို Joe ရဲ့ခေတ်မှီလွန်းတဲ့အတွေးအခေါ်အသစ်အဆန်းတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ.. Joe Weider နဲ့ Ben Weider တို့ညီအစ်ကို၂ဦးဟာသာမန်ဆင်းရဲသားလေး၂ယောက်ဘဝကနေ ကမ္ဘာကျော်ကာယအလှမောင်မဂ္ဂဇင်းများစွာနဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာကာယဗလမောင်များအဖွဲ့အစည်းကြီး IFBB ကဲ့သို့ အင်ပါယာကြီးအထိပါတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပုံကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကြည့်ရှုရမှာပါခင်ဗျ..ဒီဇာတ်ကားကို အားကစားလေ့လာသူများပဲကြည့်ရှုလို့ရမယ်ထင်ရင်မှားသွားပါမယ်..ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဒရာမာကားကောင်းများကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် လုံးဝပျင်းစရာမကောင်းပဲကြည့်ရှုရပါမယ်။Joeတို့ညီအကိုရဲ့ဘဝကိုတော်ရုံအရှုံးမပေးပုံ..ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုတစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်ပုံ..သူများထက်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုဆီကိုဘယ်လိုခက်ခက်ခဲခဲတက်လှမ်းနိုင်ပုံတို့ကိုပညာပေးရိုက်ကူးထားတယ်..နောင်တစ်ချိန်ကမ္ဘာကျော်မင်းသားကြီးဖြစ်လာမဲ့ အာနိုးကိုလည်းလူမသိသူမသိနေရာမှခေါ်ဆာင်လာပြီးအရည်အသွေးမြင့်တဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ် ကာယဗလမောင်လောကမှာရောHollywood မှာပါ Arnold Schwarzenegger ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုတွင်ကျန်အောင်ပျိုးထောင်ခဲ့ပေးပုံတို့ကိုလည်းကြည့်ရမယ်။ဒီဇာတ်ကားကိုFreestyleရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကဖြန့်ချီပြီး ဒါရိုက်တာကတော့ George Gallo ပါ..နောက်ပြီးCWကလက်ရှိပြသနေတဲ့Supergirl ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက Superman မင်းသားTyler Hoechlin ကခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပါတယ်..IMDBမှာတော့ 7.0 အထိရရှိထားပြီး Rotten Tomatoes မှာတော့ 20%သာရထားပေမဲ့အလွန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ကြည့်ရှုအားပေးသင့်ပါကြောင်း. Credit - Review
Gatao 2: Rise of the King (2018) IMDb rating 6.1 ရထားတဲ့ ဒီကားဟာ Crime အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းခံတပ်လူမိုက်ဂိုဏ်းမှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ ရန်တစ်ယောက်အရင်က ညီအစ်ကိုလို ချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ ဂျီရန်ရဲ့ ရာထူးလိုချင်မှုနဲ့အတူ ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာတွေကို တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ညီအစ်ကိုချင်း သစ္စာစောင့်သိမှုရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဘာလဲ..?ပဋိပက္ခတစ်ခုရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါ ခင်မင်ရင်နှီးမှုရဲ့ အကြွင်းအကျန်က ဘာများဖြစ်မလဲ..?ဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာပဲ ဆက်လက်ရှုစားကြပါခင်ဗျာ(ဇာတ်လမ်းအညွှန်း ကိုဗညား)
Billionaire Boys Club (2018) ” The Wolf of Wall Street ” နဲ့ “The Wizard of Lies ” တို့ကို သတိရသွား​စေမယ့်​ ဇာတ်​ကားတစ်​ကားထွက်​ရှိလာခဲ့တယ်​ ။ အဲဒီဇာတ်​ကားရဲ့ နာမည်​က Billionaire Boys Club ပါ ။ ဒီဇာတ်​ကားဟာ 1980 ခုနှစ်​ အ​စောပိုင်းကာလက တကယ့်​ဖြစ်​ရပ်​မှန်​​ပေါ်ကို အ​ခြေခံထားပြီး 1987 မှာလည်း ဒီနာမည်​နဲ့ပဲ ဇာတ်​ကားထွက်​ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်​ ။ပထမဇာတ်​ကားကို မကြည့်​ဘူး​တော့ ဒီရုပ်​ရှင်​ဟာ ပို​ကောင်းလာသလား ၊ ညံ့သွားသလား ၊ ဘာ​တွေကွဲပြားသွားသလဲ ဆိုတာကို​တော့ မသိပါဘူး ။ ဒီဇာတ်​ကားကိုကြည့်​ဖြစ်​တဲ့ အ​ကြောင်းရင်းက နာမည်​ကိုက ဆွဲ​ဆောင်​မှုရှိ​နေတာ​ကြောင့်​ပါ ။ ​နောက်​ပြီး ဒီဇာတ်​ကားမှာ ပါဝင်​အားဖြည့်​ထားတဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​​တွေ​ကြောင့်​လည်း ကြည့်​ဖြစ်​သွားခဲ့ပါတယ်​ ။ဒီဇာတ်​ကားမှာ ပါဝင်​ထားတဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​​တွေက​တော့ Ansel Elgort ...
IMDB: 5.6/10 7,049 votes
Believer (2018) ဒီကား​လေး လုံးဝကို crimeနဲ့ actionကို ကြိုက်​နှစ်​သက်​တဲ့သူ​တွေအတွက်​ တကယ်​ကိုထိမိ​စေမယ့်​ကား​လေးပါ ကားအစမှာ​တော့ ဆရာလီဆိုတဲ့ မူးယစ်​ရာဇာကိုလိုက်​စုံစမ်း​နေတဲ့စုံ​ထောက်​နဲ့ သူရဲ့သတင်း​ပေး ​ဆေးဆွဲ​နေတဲ့က​လေးမ​လေး ချာဆူ​ဂျောင်းတို့နဲ့စထားပါတယ်​ချာဆူ​ဂျောင်းက သတင်းယူ​ပေးရင်း မိသွားပြီး အသတ်​ခံလိုက်​ရတဲ့အခါမှာ​တော့ စုံ​ထောက်​ခင်​ဗျာ ​ကြေကွဲပြီး မူးယစ်​ရာဇာကို လိုက်​ဖမ်းဖို့ မရရ​အောင်​ နည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားပါ​တော့တယ်​အဲ့လိုကြိုးစားရင်း ပုံစံမျိုးစုံ အ​ခြေအ​နေမျိုးစုံ လူ​ပေါင်းစုံနဲ့ပါကြုံ​တွေ့လာရပြီး ရင်​ဆိုင်​​ဖြေရှင်းပုံ​တွေက ရယ်​ရမလို ငိူရမလိုနဲ့ ​တော်​​တော်​ကို လှိုက်​ဖို​ငေး​မောပြီး ကြည့်ရှူရမယ့်​ကား​လေးပါ​နောက်​ဆုံးကျပြန်​​တော့ ဆရာလီဆို​တော့လူက ဘယ်​သူဖြစ်​မလဲသူ့ကိုတကယ်​​ရော ရှာ​တွေ့ပါ့မလားဖမ်းလို့​ရောရဲ့လားဆိူတာကို​တော့ Believer (2018)ဆိုတဲ့ဇာတ်​ကား​လေးမှာ ကြည့်​လိုက်​ပါ​နော်​ Credit - Review
Welcome Home (2018) ဒီရုပ်ရှင်လေးကတော့ အီတလီနိုင်ငံက နယ်မြို့လေးတစ်မြို့ကို အားလပ်ရက်ခရီးထွက်လာခဲ့တဲ့ အမေရိကန်စုံတွဲတစ်တွဲ အကြောင်း Slow paced thriller ကားကောင်းလေးတကားပါအမြဲတမ်း ခရီးထွက်တိုင်း တခုခု ပြသာနာ တက်ရလေ့ရှိတယ် စုံတွဲတွေရဲ့ ပြသာနာမျိုးအတိတ်က အမှားကိုယ်စီကြောင့် ပျက်စီးခါနိး RS ကို ဘယ်လို ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြသလဲဆိုတာ ကသည်းထိပ်ရင်ဖို ကားထဲမှာကို ကြည့်လို့ကောင်းနေတာမျိုးလေးပါအဓိက ဇာတ်အိမ်ရဲ့လူဆိုးဆရာကြီး ဆိုတာမျိုးက ထင်မထားတာ တခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ စုံတွဲတွေတင်မကပါဘူးဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ရဲ့ privacy ဟာ လုံခြုံမှုရော ရှိရဲ့လားဆိုတဲ့အတွေးလေး ဝင်ကျန်ရစ်စေမယ့် Thriller ကားလေးပါဒီဇာတ်ကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ မင်းသမီးဟာ စွဲဆောင်မှုတော်တော်ရှိတာကိုတွေ့ရမှပါ 18+ ဇာတ်ဝင်ခန်းအချို့နဲ့ အနည်းငယ်ကြမ်းတမ်းသော စကားအသုံးအနှုန်းများပါဝင်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့ဇတ်ကားလေးမလို့ ကြည့်ရှု ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ Credit Review - Gold Channel